31/01/2012 : Iza no mila famotsoran-keloka ? (+vidéo)
Tao tsy mbola tonga saina tsara amin’ny fahamarinana ny ankamaroan’ny vitsy an’isa mpomba an’I tgv. Ataon’izy ireo izay mampihisatra ny famotsoran-keloka faobe mba hibahanany ny Filoha RAVALOMANANA sy hamoretany ireo nampidiriny am-ponja rehetra. Araka ny fanazavana izay nozarain’ny mpiara-mitolona avy any andrefan’Iarivo anefa dia I tgv sy ny ekipany mihitsy no tena mila izany famotsoran-keloka izany. Vao tsy ela akory izay no notsarovana ny faha-telo taonan’ny alatsinainy mainty na dia tsy nasian’ny FATE resaka mihitsy aza ny momba izany.
Tamin’io andro iray io fotsiny dia analiny ny Malagasy mpiray tanindrazana no notsofin’I tgv rano mba handroba sy handoro ary nentiny natao sorona hanamafy ny herin’ny ratsy tompoiny. Misy ny horonan-tsary manaporofo izany ary ny faharavana rehetra vokatr’io andro ratsy io dia mbola vavolombelona hita-maso isan’andro na ny eto an-drenivohitra na ny any amin’ny Faritra. Mazava izany fa izy ireo no tena mila io famotsoran-keloka io noho izany fandrangitana asa ratsy nataony izany. Tsy vitan’izany fa ny andron’ny 07 febroay dia mbola nanambara am-pahabemaso I tgv fa “omena ny vahaoaka ny lapan’Ambohitsorohitra satria an’ny kaomina” dia nanamafy ihany koa ilay praiminisitry ny lalana fa “handeha haka an’Ambohitsorohitra isika izao”. Fiakaran-dapa ny anaran’izany ary melohin’ny lalàna sady manome zo ny mpiambina hampiasa ny fitaoavana eo am-pelatanany hanakanana izay mety ho fakana an-keriny ny toerana saro-pady sy fanadraisana fanapahan-kevitra toa ireny.
31/01/2012 : Fitsenana ny Filoha RAVALOMANANA : hanatsara ny mpandrindra ny filaminana (+vidéo)
Mbola maro ny lesoka azo resahina araha ny fanomanana sy ny fandrindrana ny fitsenana ny Filoha RAVALOMANANA ny 21 janoary teo no resahina. Na ny lafiny fanamafisam-peo na ny fifampifehezana eo amin’ny mpiara-mitolona sy izay mety ho mpanakorontana. Maro ohatra ny niharan’ny harom-paosy tao anatin’ny vahoaka ary voalaza fa ny sasany tamin’ireo tanora nisalotra ny fitafian’ny mpandrindra ny filaminana no tratra nanao izany. Nisy manko olon’ny “192 fokontany” no nantsoina hanampy tamin’izany fotoana izany ary dia tsy voafehy ny sasany tamin’izy ireo fa nihoa-pefy.
Nanome toky ny mpandrindra ny filaminana androany fa hisy fanatsarana ny mikasika izany rehetra izany mba hafahan’ny mpitolona rehetra sy ny vahoaka mifantoka amin’ny andraikitra manandrify azy amin’ny fahatongavan’ny Raiamandreny fa tsy voatery hiambina ny manodidina azy indray. Iray volana sisa raha be indrindra satria alohan’ny 29 Febroary dia tsy maintsy hampihatra ny traikefa rehetra azo nandritra ny fotoana nanomanana io andro malaza io ny tsirairay ka tokony ho vonona sy ho tony mba ho afaka hiatrika izany tsara.
30/01/2012 : Tahotra ny Filoha RAVALOMANNA : milaza tsy anontaniana ny FATE (+vidéo)
Tato ho ato dia malaza tokoa ny fanazaran-tena ataon’ny ekipan’ny Jly Baomba eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato eny. Isan’ny mampametram-panontaniana ny maro ny momba ny traikefa momba ny fiarovana amin’izany fanazaran-tena aseho masoandro lava izany. Isaky ny hanao izany manko izy ireo dia manasa ny mpanao gazety rehetra haka sary sy hanadihady momba ireny “manoeuvres” ireny. Inoana fa raha tena fiarovana no tanjona dia tsy havoaka velively izay fanazaran-tena atao. Raha ny fahitana azy dia fampitahorana sy fanimbana saim-bahoaka no tena anton’ireny. Ezahina lemena ny sain’ny mpandala ny ara-dalàna mba hino fa tena tsy maintsy ho voasambotra tokoa ny Filoha RAVALOMANANA rehefa tonga eny Ivato na dia tsy marina velively aza izany.
Ny tena marina dia ireo manam-boninahitra mbola migoka ny volan’I tgv no tena miseho dadany amin’izao fandemen-tsaina izao satria matahotra mafy ny fiverenan'i Dada fa raha ny sarababen’ny tafika dia mbola mino fa ny Filoha RAVALOMANANA ihany no tena afaka mampandroso ny firenenatsika indrindra amin’ny fanarenana ny vokatry nny hadalan’ny mpnanongam-panjakana. Ireo manam-boninahitra voalaza ireo anefa dia nisy tsy tompon’ny tenany intsony ny sabotsy 21 janoary noho ny zava-pisotro maha-mamo sotroiny natay fe-potoana fiasana hany ka dia nifampisintona teo ny lehilahy ary latsaka mihitsy ny “lance grenades” teny an-tanany tamin’izany. Izany no fitondran-tenan’ny be galona Malagasy.
Anjomara fahatelo vao tena izy …
Tsy mitsahatra mifanentana ny mpitolona rehefa tafahaona eo amin’ny kianjn’ny Finoana satria “ity fahatelo ity no tena fandresena”. Ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA no resahina eto mazava ho azy. Nentin’ny mpitarika nankahery ny vahaoaka androany ny sarintsary mikasika ny sidina hitondra ny Filoha : tamin’ny 19 febroary 2011 dia tsy afaka niondrana akory ny Filoha sy ny mpanara-dia azy. Ny 21 janoary 2012 dia efa aty anaty habakabaka Malagasy ny fiaramanidina vao naverina. Amin’ny fahatelo izany dia inoanan’ny mpandala ny ara-dalàna rehetra fa hifandray tanana amin’ny Filoha RAVALOMANANA izy ireo ary handray am-pifaliana sy am-pahendrena ny valin’ny tolona natao nandritra ny telo taona.
28/01/2012 : Famotsoran-keloka : misy manao be marenina (+vidéos)
Kasain’ny FATE hahitsoka ny mikasika ny lalàna momba ny famotsoran-keloka tokony hatao alohan’ny 29 febroary. Rehefa noteran’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izy ireo tsy hanavakavaka amin’ny fanaovana izany lalàna izany dia tari-dositra no hitan’ny mpanongam-panjakana vahaolana hialana amin’izany. Matahotra mafy ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA mantsy ny FATE koa dia manao izay hevitra rehetra hanakanana izany. Vitan’izy ireo ny nisandoka ny fampitam-baovao avy amin’ny SADC taorian’ny fivoriana tany Pretoria farany teo. Odian’izy ireo tsy fantatra ny nambaran’ny Fransmann fa “tsy fepetra ara-pitsarana no hampodiana ny Filoha RAVALOMANANA fa fepetra politika”.
Vao tafaverina avy tany Afrika Atsimo, izy ireo dia efa nanomboka sahady ny fanaparitahana lainga sy fanelezana tsaho. Mazava anefa ny tatitra nataon’ny Ankolafy RAVALOMANANA sy ny fampitam-baovaon’ny SADC fa afaka mody malalaka ny Filoha RAVALOMANANA ary ny fampitsaharana ny fanenjehana politika , araka ny andininy faha-16 ao amin’ny tondro zotra, no manery ny FATE hanamora izany. Ankoatra izany anefa dia efa mazava ao anaty tondro zotra ihany koa fa mody tsy misy fepetra ny sesitany rehetra ary isan’izany ny Filoha RAVALOMANANA.
Miasa sahady …
Raha tokony nihaona tamin’ny vahoaka teo amin’ny Kianjan’ny Finoana ny delegasiona avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA dia nampitondra fialan-tsiny tamin’ny Depiote Mamitiana Ravelonanosy. Nambaran’ity farany ary fa am-perinasa tanteraka mikarakara antotan-taratasy ilaina any Addis-Abeba ireto delegasiona ireto amin’izao fotoana izao. Mivory any Etiopia manko ny vondrona afrikana amin’izao fotoana izao ary inoana fa isan’ny hiresahina ny momba an’I Madagasikara indrindra taorian’ny fanodikodinana fiaramanidina nataon’ny FATE ny sabotsy lasa teo. Raha ny fanantenan’ny mpomba ny ara-dalàna moa dia tokony afaka miaro ny zony manoloana ireo tomponandraikitra afrikana ireo ny Filoha RAVALOMANANA indrindra mikasika ny tsy nahafahany niverina an-tanindrazana ny sabotsy teo.
28/01/2012 : Tolo-tanàna ho an’ny mpiara-mitolona
Mbola maro tamin’ireo mpitolona avy any amin’ny Faritra no, mbola nijanona eto an-drenivohitra taorian’ny 21 janoary. Mbola nanantena izy ireo fa ao anatin’ny herinandro no hahatongavan’ny Filoha RAVALOMANANA rehefa nahodikodin’ny FATE ny fiaramanidina nitondra azy tamin’ny sabotsy. Ankehitriny anefa dia efa fantatra fa alohan’ny 29 febroary no hahatanterahan’izany koa dia hanapa-kevitra hody kely aloha izy ireo. Ankoatra ny komity manokana mikarakara ireto mpitolona avy amin’ny Faritra ireto dia misy ny mila fanampiana manokana satria tena lavitra loatra ny fiaviany. Isan’izany ny avy any amin’ny distrikan’I Marovoay. 25 000 ariary isan’olona no saran-dalana miverina ho azy 36 mianadahy.
Noho ny lesoka teo amin’ny fifampitondran’ny mpandala ny ara-dalàna any an-toerana dia nanaovana latsa-kemboka teo amin’ny kianjan’ny Finoana izy ireo mba hahafahany mody any Marovoay. Nahatratra 106 170 Ariary ny voatsirambin’ny tanana tamin’izany ary ankoatra izany dia misy malala-tanana efa hiantoka saran-dalana ho an’ny efatra amin’izy ireo. Misy ihany koa ny mpiara-mitolona avy any ivelany nanome 50 000 Ariary ho fanampiana ireo avy any amin’ny faritra mbola tafajanona eto Antananarivo ary ny mpiasan’ny TIKO dia nanome vary 50 Kg ho azy ireo ihany koa. Izany rehetra izany dia sady manamafy ny firaisan-kinan’ny mpomba ny Filoha RAVALOMANANA no manaporofo ihany koa fa tsy misy vidiam-bola ny mpara-dia azy fa resy lahatra amin’ny zava-bitany hatrizay ary mbola vonona hanampya azy hanao misimisy kokoa.
25/01/2012 : Magro : vonona hitsena ny Filoha RAVALOMANANA indray (+vidéos)
Araka ny vaovao voaray avy any Afrika Atsimo dia hody alohan’ny 29 febroary ny Filoha RAVALOMANANA ary ny SADC mihitsy no hiandraikitra ny fiarovana azy akaiky. Noho izany ary dia efa hamerina sahady ny fanentanana any amin’ny mpiara-monina nny vahoaka mpandala ny ara-dalàna. “Ilaina maro lavitra noho ny tamin’ny 21 janoary isika” ho ny depiote Mamitiana Ravelonanosy “mba hahafantaran’izao tontolo izao ny lanjan’izany mpandala ny ara-dalàna eto Madagasikara izany”.
Na izany aza dia nambaran’ity olom-boafidy TIM ity fa “tsy tokony hitondra ny tetezamita intsony I tgv”. Nazavainy fa ny zava-nitranga tamin’ny sabotsy dia fandikana mihoa-papana ny tondro zotra izay nametraka azy ho filoha na dia mpanongam-panjakana aza. Rehefa manitsaka ny tondro zotra izany I tgv dia manala tena tsy ho filohan’ny tetezamita avy hatrany.
Fitoniana : hiandry SADC indray ???
Raha 26 minitra zo hamaly an’I Voninahitsy no nifanarahana tamin’ny TVM ny alatsinainy teo dia nandalo sivana ny fanadaharana. Ora iray no lany nandraisana ny sary sy ny feo saingy rehefa nifarana ny vaovao an-tsary hariva dia tsy nandeha ny fandaharana. Tany amin’ny misasakalina latsaka vao nandeha izany ary zara raha nahita 13 minitra sisa satria dia notapatapahina avokoa izay resaka “manelingelina” nataon’Ihanta randriamandranto sy ny Me. Hanitra Razafimanantsoa.
Raha fahafahana madiodio indray no voarakitra anaty tondro zotra dia famindran-toerana no nomena ireo gadra politika sasany alina. Misy ireo manamboninahitra nampangaina tamin’ny raharaha BANI no nalefa ao Antanimora raha tany Tsiafahy taloha. Ny raharaha FIGN kosa dia,nozarazaraina Antsirabe, Arivonimamo ary mbola misy enina mirahalahy najanona ao Tsiafahy.
“Sarintsarim-pitoniana izany” hoy Ignace avy any Moramanga “fa aoka tsy hifanadala”. Nambarany ary fa tsy manaraka ny nifanarahana ao anaty tondro zotra izany rehetra izany ka tsy azo ekena. Nanaitra ny fandraisan’andraikitry ny olom-boatendry rehetra ny tenany hanery ny fanitsiana izao fihetsika tsy mety izao. Nanentana ny mpanao politika nahatsapa ny ratsy nataon’I tgv ihany koa izy mba tsy hijanona ho fanambarana ihany izany fa havadika ho asa ka tanjona voalohany tokony iaraha-manatratra izay mitondra mankany amin’ny fifampihavanana dia ny fitoniana politika sy sosialy.
24/01/2012 : Arakaraka ny anakanana no mampitombo ny mpitsena (+vidéos)
Mbola mitana ny sain’ny mpanara-baovao hatreto ny hamaroan’ny olona nivonona hitsena ny Filoha RAVALOMANANA ny sabotsy lasa teo. Raha tsiahivina ny tamin’ny 19 febroary 2010 dia azo lazaina fa nitombo avo roa heny izany tamin’iny 21 janoary 2012 iny. Na ny fijery ivelany izany dia efa afaka andrefesana ny asa vitan’ny FATE ao anatin’ny herintaona satria matoa mitombo fahavitrihana hitsena ny Filoham-pirenena lanim-bahoaka farany ny Malagasy dia mazava fa noho ny fahitan’izy ireo ny tsy mety ataon’ny mpanongam-panjakana. Mazava hoazy fa iny fanakanana faharoa iny dia mbola hampitombo indray ny fitiavan’ny vahoaka ny Filoha RAVALOMANANA sady mandetika ny FATE eo anatrehan’ny mpiray tanindrazana sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena.
Nokaramaina 20000 Ar.?
Matetika rehefa hanenjika ny zanak’I Dada ny mpomba ny FATE dia ny fomba fanaony no lazainy fa ataon’izy ireo. Efa zatra loatra ny mividy olona izy ireo amin’izay mety ho hetsika politika ataony hany ka lazainy fa nandoavana 20000 Ar. isan’olona ireo vahoaka anetsiny tonga teny Ivato. Tsara anefa ny manamarika fa tao anatin’ny fandrindrana ny fitsenana dia ny trano hatoriana ihany no niraisin’ny Ankolafy an-tanana ho an’ireo avy any amin’ny faritra fa ny ankoatra izay dia mianto-tena avokoa ny mpikatroka. Porofon’izany ny fisian’ireo namonjy fodiana ka any an-toerana vao handoa ny saran-dalany na manao ny atao hoe “payement à l’arrivée”. Misy koa anefa ireo tsy mbola manaiky hiala eto an-drenivohitra noho ny finoany fa tsy hoela dia ho tonga izany Filoha andrandrain’ny mpiray tanindrazana izany.
23/01/2012 : Tsimbazaza : nogejain'ny be bôty ny sora-baventy nitsenana an'i Dada ... (+vidéo)
Nijoro vavolombelona tamin’ny tsindry hazo lena nahazo azy ny mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita avy any Ambatoboeny androany. Tsy mbola tonga teny Ivato akory dia efa naharary ny be boty ny sora-baventy nokasain’izy ireop ho entina nitsena ny Filoha RAVALOMANANA ny sabotsy lasa teo. Araka ny filazan’I Charline dia teo am-pananganana ny sora-bevanty mba ho azo lanjaina ireo mpomba ny Filoham-pirenena avy any amin’ny distrika misy azy no nanaovan’ny mpiambina ny lapan’ny kongresy be midina tao an-tranony. Nalain’izy ireo an-keriny tamin’izany ny sora-beventy mirary tonga soa an’I Dada ary saika tsy navoaka raha tsy nifanazavana minitra maro.
Tahotra no betsaka …
Nahita maso fa tsy nitantarana ny solotenan’Ambatoboeny tamin’iny sabotsy 21 janoary iny. Afaka nanaporofo izy ireo fa tena matahotra fadiranovana ny Filoha RAVALOMANANA ny FATE. Mazava hoazy fa mahatsapa ny tsy nety nataony ihany ireto mpanongam-panjakana ireto saingy , raha misy ny te-hanao izany, tsy afaka mihemotra intsony satria efa lasa lalina dia lalina. Ny vola ampiasain’izy ireo dia maniraka ny mpiara-dia aminy hamono ny feon’ny fieritreretany. Nokianin’ity CT avy any Ambatoboeny ity mafy ny vaovao manokana nanasan’ny televiziona Malagasy an’I Voninahitsy Jean Eugène. “Mazava fa miketrika ny hiakatra eo amin’ny toeran’ny filohan’ny CT ianao” hoy Charline “ka dia sahinao ny miampanga ny Ankolafy RAVALOMANANA ho mampiady ny samy Malagasy”.